Tantara - Vondrona UP
Tamin'ny 2003, UP Group-Shanghai UPG International dia natsangan'ny orinasam-pahefana lehibe teo amin'ny minisiteran'ny milina teo aloha tao amin'ny Repoblikan'i Sina, manana ekipa mpivarotra entana mihoatra ny 40 ny mpiasa. Orinasa mpivarotra raharaham-bahiny matihanina ao amin'ny vondrona UP izay mifantoka amin'ny asa fanondranana pirinty sy fonosana, milina plastika ary fanjifana mifandraika amin'izany., Sns. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa stratejika maharitra sy maharitra amin'ny agents amin'ny firenena mihoatra ny 40. Ny vokatra dia manarona firenena mihoatra ny 80 any amin'ny kaontinanta 6 eto amin'izao tontolo izao ary manondrana any amin'ny firenena 50 mahery isan-taona.
Raisinay ny teknolojia sy ny kalitao ho toy ny fototra ary mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa ho tanjona amin'ny fitantanana siantifika sy ny fanavaozana mitohy izay manambatra ny fikarohana sy ny fampandrosoana siantifika, ny famokarana ary ny varotra varotra ivelany mba hanomezana vahaolana tokana sy fanohanana ara-teknika ny fanontana sy ny fonosana any ivelany. mpanjifan'ny indostria fingotra sy plastika.
Jiangyin Huitong fanontana sy fonosana Machines Co., Ltd., ny mpikambana ao amin'ny vondrona UP, no mpitarika ny indostrialy fonosana fonosana milina. Izy io dia manarona milina fanontam-pirinty, milina fanamainana, milina fanaraha-maso, milina fametahana sy famerenana, milina fanaovana plastika, milina fanosotra., sns izay tsy vitan'ny fandrakofana vokatra lehibe sy ny anjarany amin'ny tsena any Shina fa mitombo ihany koa ny tahan'ny fanondranana isan-taona, manana laza malaza sy fanantenana ho an'ny fampandrosoana ny vokatra izy io. Ankoatr'izay, ny orinasa dia nanangana fiaraha-miasa stratejika maharitra miaraka amin'ny orinasa matanjaka mihoatra ny 10 any Shina. Ny fari-vokatra sy ny fampidirana indostrialy dia afaka manome safidy betsaka kokoa ho an'ny mpanjifa any ivelany.
Manantena izahay fa ho tonga any aminay ny mpanjifa any ivelany bebe kokoa ary hanao izay fara herinay izahay hanomezana vokatra azo antoka sy serivisy avo lenta hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa